Codashop ရဲ့ Telegram ကို Join ပြီး ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်ရယူပါ! | Codashop Blog MM
Codashop ရဲ့ Telegram ကို Join ပြီး ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်ရယူပါ!
ဒီအစီအစဥ်ကတော့ Codashop ရဲ့ တရားဝင် Telegram Channel ကို Join ပြီး ဖုန်းဘေလ်ကံထူးနိုင်မယ့်အစီအစဥ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Codashop နဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ ဂိမ်းတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ Update တွေသိနိုင်ဖို့ အခုပဲ Join ထားလိုက်ပါ!
Telegram Channel သို့သွားရန်
👉 Codashop ရဲ့ တရားဝင် Telegram Channel သို့သွားပါ။
👉 Codashop Myanmar ဆိုတဲ့ Channel ကိုတွေ့ရင် Join Channel လုပ်ပြီး Screenshot ရိုက်လိုက်ပါ။
👉 ထို Screenshot နဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့ Telegram User Name ကို ဒီကြေညာပိုစ့်ရဲ့အောက်မှာ ကောမင့်ပေးလိုက်ပါ။
စည်းကမ်းချက်များနဲ့အညီပါဝင်တဲ့ဘော်ဒါတွေထဲက (၂၀)ဦးကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး ဖုန်းဘေလ် (၅,၀၀၀)ကျပ်စီ လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၈) မှ မတ် (၃) အထိ
🎁 လက်ဆောင်ကံထူးကြေညာခြင်းနှင့် လက်ဆောင်ထုတ်ယူခြင်း
ဖုန်းဘေလ် (၅,၀၀၀)ကျပ်ကံထူးတဲ့ ဘော်ဒါအယောက် (၂၀)ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို Codashop Facebook Page မှတစ်ဆင့် ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းဘေလ်ကံထူးတဲ့ဘော်ဒါတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို Codashop Facebook Page Messenger သို့ ကံထူးသူကြေညာပြီး (၂) ပတ်အတွင်းပေးပို့ထားရမှာဖြစ်ပြီး (၂)ပတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်မပေးပို့ပါက ဖုန်းဘေလ်ထုတ်ယူခွင့်မရှိတော့ပါ။
Previous articlePUBG Mobile အတွက် EasyPoints နဲ့ ဝယ်ပြီး 52% အထိ UC လက်ဆောင်များရယူပါ!
Next articleCodashop Facebook Top Fan Giveaway!